Sida loo kariyo hadhuudhka ku yaal Multicooker Redmond? Raashin waxtar leh
Hilib la karkariyey waa badeeco dhadhan fiican leh oo caafimaad leh, sidaa darteed cuntada sida saxda ah waa inay ahaataa midka wax lagu karsado. Tiknoolajiyada casriga ahi waxay kuu ogolaaneysaa inaad samayso habka wax loo kariyo hadhuudhka fudud oo degdeg ah Sida loo kariyo hadhuudhkii la kariyey, inta jeer ee la sugayo, iyo sidoo kale talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay dumarka guriga.
Faahfaahin ku saabsan sida loo keydiyo dabacasaha Maqsin xilliga qaboobaha ee bacaha sonkorta
Dayrta waa wakhtigii beergooyska. Waqti badan iyo dadaal ayaa la isticmaalay si saxan oo saladh ah oo saladh ah oo digaag cusub loo diyaariyey si ay u farxaan isha. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna inaad dalagdo dalagga, waxaad u baahan tahay inaad ku badbaadiso, sababtoo ah haddii aan si haboon loo kaydin, karootada si deg deg ah u lumisa midabka iyo dhadhanka, waxay noqotaa mid qalalan oo aan ladnayn.
Talooyinka Guri-ga - Maxaa laga Diyaarin Karaa Korniinka Cob
Corn waa badeecad nafaqo leh oo loo isticmaalo waxyaabaha ugu muhiimsan ee liistada hodanka ah ee suxuunta. Si aad u marti qaado martidaada, qoyska iyo, ugu horeyn, adiga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo kariyo hadhuudhka, iyo waxa suxuunta ay mudan yihiin. Kuwa soo socda waa soodhaha ugu fiican ee la isku qurxiyo.
Cunnooyinka si aad u sameysid suxuunta wasakhaysan ee qaboojiyaha mashiinka qafiifka ah. Tallaabo tallaabo tallaabo leh sawiro
Corn waa warshad fool-maroodi ah oo lagu yaqaanay aadanaha dhawr kun oo sano. Muuqaal ahaan, waxay ku jirto kaalinta saddexaad ee darajada firileyda, tan labaad oo keliya bariiska iyo sarreenka. Warshadda waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed ee loogu talagalay diyaarinta kharajyada iyo kharashyada caafimaadka. Maqaarka, waxaa loo isticmaalaa in lagu xanaaneeyo maqaarka iyo maqaarka dhibka, si loo xoojiyo timaha.
Cuntooyinka kala duwan ee boorashka hadhuudhka: sida loo kariyo si loo sameeyo saxan aad u dhadhan fiican leh?
Ballan-qaadka quruxda waa caafimaad. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu noqdo qof qurux badan oo caafimaad qaba. Nadaafad habboon ayaa qayb muhiim ah ka ah nolosheena. Shaqada jirkeena, gobolkeenu wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay waxa aan cuno. Boorashka marsada waa door wanaagsan oo loogu talagalay quraac caafimaad leh, qado loogu talagalay gabdhaha, iyo xitaa casho loogu talagalay rag xooggan.
Corn: sida loo kariyo, si ay u ahayd jilicsan iyo casiir leh?
Corn waa cuntad aad u fiican oo caafimaad leh, oo loo adeegsado karinta. Waa la keydiyaa, la kariyey, la shiilay, subag ayaa laga sameeyey, lowskuna waa la kariyaa, oo loo isticmaalo inuu sameeyo shukulaatada iyo doofaarka. Caanaha siriyaalkani waxaa lagu sharaxay ma aha oo kaliya qaabka ay u isticmaalaan, laakiin sidoo kale dhadhankiisa gaarka ah iyo korontada.
Dhab ahaantii qof kasta waa ogyahay sida hadhuudhka dhalinyarada ee faa'iido leh. Laakiin dadka oo dhan ma ogaadaan xaqiiqda ah in hadhuudhkii hore, marka si habboon u diyaarsan, waxay sidoo kale noqon kartaa mid aad u dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh. Sidaa daraadeed, inaad iibsato warshad aad u badan, waa inaadan isla markiiba tuurin. Wakhti yar qaadashada, waxaad cuni kartaa saxan macaan.
Mashiinka diiran ma aha dhibaato: sida loo badbaadiyo dabacasaha waqti dheer?
Bannaanka u badan ayaa xiiso leh sida loo keydiyo dabacasaha diirimaad diiran. Karootada waa khudrado caan ah, faa'iidooyinka taas oo aan la ogeyn oo kaliya dadka waaweyn, laakiin sidoo kale carruurta. Laga soo bilaabo waxa aad cuni kartaa maraq, saxan weyn iyo xitaa keega. Carrot waa warshad qashin biyood ah oo ka tirsan qoyska celery.
Sidee ayaad u karin kartaa hadhuudhka dhalmada iyo inta jeer ee aad karisid?
Corn waa raashin la yaqaan oo la yaqaan. Waxaa la koray oo si firfircoon loogu isticmaalay cunto karinta sanadihii hore. Markii ugu horreysay waxay bilaabatay inay u koraan sidii dhaqanka guriga ee Mexico ee qarnigii 12aad. Si dhakhso ah, cawskaasi aad u faafay adduunka oo dhan, ayaa noqday kuwa ugu jecel quruumo badan. Lama soo jeedin dareenkiisa iyo jilayaasha, keenista miiska oo leh dhadhan macaan iyo jilicsan oo kala duwan.
Corn: sida loo qalajiyo guriga iyo sida loo kariyo markaa?
Kumaa aan garanayno hadhuudhka? Qof kastaa wuu ogyahay inuu ka yimi carruurnimadiisii, laakiin cid kastaa way ogyihiin hantidooda waxtarka leh, iyo sidoo kale siyaabo lagu soo ururiyo boqoradda boqoradda. Waxaa loo isticmaalo kaliya ma karinta, laakiin xitaa daaweynta cudurrada. Cunnooyinka daaweynta dadwaynaha waxay ka kooban tahay hadhuudhka loogu talagalay kharashyada daawooyinka iyo fuska.
Qalabka lagu kaydiyo dabacasaha carrada iyo kan midkuu wanaagsan yahay inuu doorto: qalalan ama qoyan
Karootada waa quruxda beerta dhabta ah, laakiin way adag tahay in la ilaaliyo isticmaalka xilliga jiilaalka. Dalagyada rootiga ayaa ah mid furan oo dalbanaya xaaladaha kaydinta. Miraha waxay gaar ahaan u nugul yihiin biqilka iyo infakshanka fungal (bilaw inaad kudagtid). Sidee loo dhigaa karootada cusub oo dhadhan fiican ilaa xilli xiga?
Waa maxay shuruudaha loo baahan yahay in lagu keydiyo dabacasaha iyo xididadaha jiilaalka ee hoosta hoose iyadoo la adeegsanaayo baakooyinka?
Khudaarta cagaaran, sida xayawaanka iyo dabacasaha, waa in lagu keydiyaa si ay u noqdaan kuwo xoog leh, caafimaad leh oo soo baxaya ilaa ay baabba'aan, haddii kale, nasiib daro, ma heli doonaan dhammaan dhadhanka iyo faa'iidooyinka caafimaadkooda. Tixgeli hab cusub oo kuu ogolaanaya inaad heysid casriyeysiga iyo casriga khudaarta - tani waa kaydinta bacyada blaastikada.
Immisa iyo sida loo kariyo hadhuudhka, oo ay ku jiraan barafaysan, iyo waxa la kariyana karo?
Corn ayaa muddo dheer loo yeeray "boqoradda beertu." Ninkani magaciisa ayaa la siiyay sababtoo ah tiro badan oo ah tayada waxtarka leh, kuwaas oo intooda badan lagu keydiyay xitaa xaalad barafaysan. Ka mid noqoshada cuntooyinka hadhuudhku waxay saameyn ku yeelataa caafimaadka dadka. Waxyaalaha ayaa faa'iido leh da 'kasta, waxay buuxisaa la'aanta qaybaha muhiimka ah ee raadinta jirka si wanaagsan u shaqeynaya.
Wax walba oo ku saabsan sida loo kariyo hadhuudh macaan - guriga iyo digsiyada kale
Corn waa shey aan ka badnayn booskiisa baradho ama bariis. Waxaa jira fursado badan oo lagu karsado noocyo kala duwan oo ka mid ah suxuunta kalluunka hadhuudhka ah, sida burka, suxuunta cuntada, siriyaalka, dhirta iyo tiro badan oo alaabooyin kale ah oo si fiican u caafimaad qaba oo caafimaad qaba. Waa la kariyey, la shiilay, qasacadaysan, la dubay.
All oo ku saabsan sida loo kariyo hadhuudhkii foornada: u jeestay kobcinta daweyn xun
Noloshiisa, qof kasta wuxuu wajahayaa geeddi-socodka karinta hadhuudhka kariyaha, laakiin waxaa jira habab kale oo loo kariyo siriyalka. Mid ka mid ah kuwan waxay ku karisaa firileyda foornada. Sida loo kariyo hadhuudhka foornada, ka akhri. Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh si aad u daawato videoka. Doorashada jiilka Waxay u egtahay in aysan jirin wax adag in la kariyo hadhuudhka, kaliya ku riix biyo daar ah oo u dir dabka, laakiin ma aha mid fudud.
Habka la awoodi karo in lagu keydiyo karootada sida balka. Tilmaamo faahfaahsan, faa'iido leh iyo tabaha tiknoolajiyada
Karootada ayaa ka mid ah dalagyada khudradda caanka ah ee ugu caansan si ay u koraan beerahooda. Khudaar cagaaran, qudaar iyo dhir macaan leh ayaa si gaar ah ugu fiicnaanaya in la cuno xilliga jiilaalka. Si loo ilaaliyo sifooyinka wanaagsan ee dabacasaha, waa muhiim in la doorto habka saxda ah ee kaydinta. Miyuu suurtogal ah in lagu keydiyo khudaarta xididka leh sida balka? Waxaan ogaannay dhammaan muuqaalada tiknoolajiyada.
Sida loo keydiyo karootada Maqsin ee Masti ee xilliga qaboobaha: faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ee habkan
Karootada waa mid ka mid ah khudaarta ugu badan ee loo isticmaalo. Oo khudraddan waxaa koray beeraleyda oo dhan, sida baradhada ama basasha. Dalagga beeraha waa in la ilaaliyaa, sababtoo ah Si dhakhso ah looma isticmaali karo. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu kaydiyo, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo keydiyo khudaarta jiilaalka.
Cunnooyinka dhaqsaha leh ee dhadhanka leh ee hadhuudhka ku jira laba dabayl. Suugaanta sawirada iyo waqtiyada wax lagu kariyo
Corn waa mid ka mid ah dalagga ugu caansan, labadaba gudaha dalkeena iyo dibadda. Waxaa ku jira xubno raad, macdan iyo fitamiino. Iyada oo ay ugu wacan tahay waxyaabo badan oo faa'iido leh ee badeecadani, waxaa loo isticmaali karaa in badan oo cunto ah, iyo diyaarinta warshadu waa suurtogal ayadoo laga caawinayo karbuun, foornada mikroway, foornada iyo xitaa boorsada labajibbaaran.
Siyaabaha wax loo kariyo hadhuudhka digsi: sida loo kariyo si uu u jilicsan yahay iyo casiir leh?
Muddo ka badan hal sano, bani-aadmiga ayaa kor u qaaday "boqoradda beertu". Waddanku waa Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Corn wuxuu ku dhacay qaaradda qaarada Columbus. Qabiilada qadiimiga ah ee Hindida ayaa ku magacawday dhaqankan "galley", iyo Spain "kukuruko", taas oo macnaheedu yahay asxaab. Waxa xiiso leh, saynisyahannadu weli wali ma dhicin awoowe-baxa duurjoogta ah.
Sida loo kariyo iyo sida loo kariyo mini-hadhuudh?
Miro-hadhuudh ayaa lagu soo bandhigaa qaabab yar yar oo qaabab kala duwan ah, farqiga ugu weyn ee laga helo galley dhaqameedku waa maqnaanshaha miraha. Iyadoo la tixgelinayo sifooyinkaas, habka loo diyaariyo mini-hadhuudh waxay kaloo ka duwan tahay cunnada karinta ee qaabka caadiga ah. Tilmaamaha Dhimista madaxa ee mini-hadhuudhku waa 8-12 cm, iyo dhexroorku wuxuu gaaraa 2-4 mm.
Sidee iyo intee in le'eg oo loo kariyo hadhuudhka dhalinyarada ah ee digaagga ee digsi?
Giant Capricious leh dhalid sare - nooc hybrid ah yaanyo "Tornado"
Waa maxay sababta geedkii gubanaya faa'iido leh?
Tilmaanta iyo sawirada noocyada ugu fiican ee Chrysanthemums Korean
Krestovnik krupnoyazkovy - Luqadda Koonfur Afrika "nin da 'ah
Tani waa bogga "Ganacsiga Ganacsiga". Si loo hubiyo tayada shaqada, xaaladaha nadaafadda iyo xaaladaha shaqada, xaaladaha shaqada, shaqaalaha Xafiiska Hantidhowrka Gobolka ayaan sii wadi doonin kahor imaanshahooda. Xeerarkani waa ka reeban keliya haddii Xafiiska Xisaabinta Gobolka uu rabo inuu sameeyo baaritaan ama tallaabooyin kale oo aan la xiriirin xisaabta. Read More
Muuqaalka beertaada: ciriiri
Tomato "Countryman" sharaxaad iyo astaamo